Nnwom 98 NA-TWI - Onyankopɔn, wiase Hene - Monto dwom - Bible Gateway
Nnwom 97Nnwom 99
Nnwom 98 Nkwa Asem (NA-TWI)
98 Monto dwom foforo mma Awurade. Wayɛ anwonwade bebree! Ɔnam ne tumi ne n’ahoɔden kronkron so adi nkonim. 2 Awurade bɔɔ ne nkonimdi ho nkae; ɔdaa tumi a ɔnam so gye nkwa no adi kyerɛɛ aman. 3 Odii bɔ a ɔhyɛɛ Israelfo no so wɔ ne nokware ne ɔdɔ a ɔdɔɔ wɔn daa no mu. Nnipa a wɔwɔ baabiara ahu yɛn Nyankopɔn nkonimdi. 4 To dwom a ɛma ahosɛpɛw ma Awurade, mo asase nyinaa, momfa nnwom ne ahosɛpɛw nteɛteɛm nkamfo no.